AMARADIPA…….အမရဒီပ: ပိဋက နှင့် နိကာယ်ကို သရုပ်မကွဲသူအဘိဓမ္မာဆရာတဦး (စင်္ကာပူ၊ အဘိဓမ္မာအသင်းကြီးသို့ )
ဖော်ပြခြင်းမပြုဘဲ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်အားဖြင့်သာ ဟောပြသောတရားတော်များစုဝေးရာနေရာဖြစ်သည်။
အဘိဓမ္မာကို သင်တန်းအဖြစ်ရော၊ တရားပွဲအဖြစ်ရော သင်ကြားပို့ ချမှုများမှာ ယနေ့ ခေတ်သည်
အလွန်ပွင့်လင်းသောခေတ်ဖြစ်လေသည်။သို့ ဖြစ်ပေရာ မိမိသည်လည်း အဘိဓမ္မာသင်တန်း၊ အဘိဓမ္မာ
တရားတော်များကို အွန်လိုင်းမှတဆင့် လေ့လာသင်ယူသူတဦးဖြစ်နေခဲ့သည်။ အခြားတပါးသို့ သွား
ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ ကိုယ့်နေရာကလေးမှာပင် အဘိဓမ္မာတရားကို လေ့လာခဲ့ရခြင်းအတွက် အလွန်ပင် သက်တောင့်သက်သာရှိလှ၏။ ခေတ်သစ်တက္ကနိုလိုဂျီသည် ဗုဒ္ဓတရားတော်ကို လေ့လာသင်ယူရာတွင်
ထိရောက်သော သင်ထောက်ကူပစ္စည်းတခုဖြစ်ပေရာ အလွန်ကျေးဇူးများလှ၏။
စင်္ကာပူနိုင်ငံ၊ အဘိဓမ္မာအသင်းကြီး (Abhidhamma Foundation) ၏ အဘိဓမ္မာသင်တန်းအသံဖိုင်များကို
နာယူမိသည်။ ပထမအသံဖိုင်မှာ အဖွင့်တရားတော်ဖြစ်သည်။ ယင်းတရားဟောပြောချက်တွင် သင်တန်းဆရာက
ပိဋက ၃ ပုံ၊ နိကာယ် ၅ ရပ်အကြောင်းကို ရှင်းပြသွားပါ၏။ ထိုသင်တန်းဆရာ၏ရှင်းပြချက်မှာ ကြားနေကျ
အဓိပ္ပါယ်မဟုတ်ဘဲ ထူးဆန်းနေ၏။ သူ၏ရှင်းပြချက်ဆိုလိုရင်းမှာ ဖော်ပြပါအတိုင်းဖြစ်၏။ (မူရင်းကိုနားထောင်လိုက ဆောင်းပါးအဆုံးသတ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်လင့်အတိုင်း သွားပါလေ-------။)
"မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကို ဓမ္မက္ခန္ဓာအားဖြင့်ရေတွက်မယ်ဆိုရင် ရှစ်သောင်း
လေးထောင်ရှိတယ်။အသောကမင်းတရားကြီးက ရေတွင်းပေါင်းရှစ်သောင်းလေးထောင်၊ ရေကန်ပေါင်း
ရှစ်သောင်းလေးထောင်၊ စေတီပေါင်းရှစ်သောင်းလေးထောင်တည်တယ်ဆိုတာ အဲဒီ ဓမ္မက္ခန္ဓာကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ 
တည်တာပဲ။ အဲဒီတော့ ဓမ္မက္ခန္ဓာပေါင်းရှစ်သောင်းလေးထောင်ကို အကျဉ်းအားဖြင့်ထပ်ခွဲပါဆိုတော့
နံပတ် ၁- ဝိနည်းပိဋကတ်၊ ဝိနည်းပိဋကတ်မှာ ဓမ္မက္ခန္ဓာပေါင်း နှစ်သောင်းတထောင်၊ ၂-သုတ္တန်ပိဋကတ်မှာ ဓမ္မက္ခန္ဓာပေါင်းနှစ်သောင်းတထောင်၊ အဘိဓမ္မာပိဋကတ်မှာ ဓမ္မက္ခန္ဓာပေါင်းလေးသောင်းနှစ်ထောင်၊ အားလုံးပေါင်းရှစ်သောင်းလေးထောင်-----။ နိကာယ် ၅ ရပ်အနေနဲ့ ခွဲရင်ဒီဃနိကာယ်၊ မဇ္ဈိမနိကာယ်၊
အဂုင်္တ္တရနိကာယ်၊ သံယုတ္တနိကာယ်၊ ခုဒ္ဒကနိကာယ်၊ အားလုံးပေါင်း ၅ ခု--။
အဲဒီတော့ လူတွေမှာ ပြဿနာတက်တာရှိတယ်၊ ပိဋကသုံးပုံနဲ့ နိကာယ် ၅ ရပ်တူသလားဆိုတော့ မတူဘူး၊
မှတ်ထားနော်၊ သို့ သော်လည်း ပိဋက ၃ ပုံကို နိကာယ် ၅ ရပ်ထဲမှာ သွင်းဆိုသွင်းလို့ ရတယ်။ ဝိနည်း၊သုတ္တန်၊ အဘိဓမ္မာပိဋကတ်အားလုံးဟာ ခုဒ္ဒကနိကာယ်ထဲမှာ ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ပိဋက ၃ ပုံရွတ်တာကို တိပိဋကလို့ 
ပြောတယ်။ နိကာယ်တွေကို ရွတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်၊ နိကာယ်အတွက် စာအုပ်တွေကသီးသန့် ရှိသေးတယ်။
နိကာယ် ၅ ရပ်လုံးကို အာဂုံဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ မပေါ်သေးဘူး။ ပိဋကတ်သုံးပုံကို အာဂုံဆောင်တာနဲ့ ၊
နိကာယ် ၅ ရပ်ကို အာဂုံဆောင်တာနဲ့မတူဘူး။ လူတွေမှာတခါတလေကျရင် ဝေသွားတတ်တယ်နော်--။
ဝိနည်းပိဋကရော၊ သုတ္တန်ပိဋကရော၊ အဘိဓမ္မာပိဋကရော နိကာယ်အားဖြင့်ပြောလိုက်ရင် ခုဒ္ဒကနိကာယ်ထဲ ရောက်သွားတယ်နော်--။ခုဒ္ဒကနိကာယ်တခုတည်းပဲ--။
သာသနာလောကမှာ---တိပိဋကတွေ---မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးတို့ တော့ ပေါ်ပြီနဲ့ တူတယ်။ နိကာယ် ၅ ရပ်ထဲမှာ
နိကာယ် ၄ ခုလောက်ကို အာဂုံဆောင်နိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တပါးပေါ်တယ်။ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလဲဆိုရင် ဘုန်းဘုန်းတို့ တော့
မမှီဘူး။ သူ့ ကိုဘုန်းကြီးဘဝနဲ့ မမှီဘူး။ သူဟာ ယောက်ကော်ဆရာတော်တို့ ၊ ဦးပရမဝဏ္ဏသိဒ္ဓိတို့ နဲ့ အတူတူ
ဗိုလ်ချုပ်စိန်လွင်လက်ထက်မှာ လူချွတ်ခံရတယ်နဲ့ တူတယ်။ သူ့ ဘုန်းကြီးဘွဲ့ တော့ မသိဘူး။ သူဟာဟိုအရင်တုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာသာသနာ့ရောင်ခြည်ဆိုတဲ့စာစောင်ဆိုတာထွက်တယ်လေ။အဲဒီမှာ ဦးစံတင့် (စတုနိကာယဘာဏက) ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။ သူက နိကာယ် ၄ ခုအထိ အာဂုံဆောင်နိုင်တယ်။
ဒါ--- နိကာယ်နဲ့ ပိဋကတ်နဲ့ မတူဘူးဆိုတာပြောပြတာ--။ "
သင်တန်းပြဆရာ၏စကားတို့ ကို အကျဉ်းချုပ်ကြည့်သည်။
(က) ပိဋက ၃ ပုံ နှင့် နိကာယ် ၅ ရပ်ဆိုတာအတူတူမဟုတ်
(ခ) ပိဋက ၃ ပုံဆိုတာ နိကာယ်အားဖြင့် ခုဒ္ဒကနိကာယ် တခုတည်းပါ။
(ဂ) နိကာယ်စာအုပ် (နိကာယ်ကျမ်း)များဟု သီးသန့် ရှိသည်။
(ဃ) ပိဋက ၃ ပုံစာမေးပွဲအောင်သော်လည်း နိကာယ် ၅ ရပ်ကို အောင်မြင်သူမဖြစ်နိုင်
(င) နိကာယ် ၅ ရပ်အနက် မြန်မာပြည်မှာ နိကာယ် ၄ ရပ်အောင်မြင်သူမှာ ဦးစံတင့် (စတုနိကာယဘာဏက) ဆိုသူတယောက်သာရှိသေးသည်။ သူ့ အပြင် နောက်ထပ်မပေါ်သေး။
ပါရာဇိကကဏ္ဍအဋ္ဌကထာ၊ သီလက္ခန္ဓဝဂ္ဂဋ္ဌကထာ၊ အဋ္ဌသာလိနီအဋ္ဌကထာ (ပါ-သီ-အ)ဟူသော အဋ္ဌကထာကြီး
၃ စောင်၏ နိဒါနကထာပိုင်းတွင် ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်စံတော်မူလေပြီးသောမြတ်စွာဘုရားရှင်၏စကားတော်များကို
အရှင်မဟာကဿပဦးဆောင်၍သံဂါယနာတင်ကြရာတွင် အမျိုးအစားအလိုက်၊ အရွယ်အစားအလိုက်စနစ်တကျ
စုစည်းလိုက်ကြပုံများကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါ၏။ စင်္ကာပူ၊အဘိဓမ္မာအသင်းနည်းပြဆရာ၏ရှင်းပြချက်မှားသည်၊ မှန်သည်ကို ဝေဖန်ဆန်းစစ်ရာတွင် အထက်ပါအဋ္ဌကထာကြီးများ၏အဆိုအမိန့် များကို မှတ်ကျောက်အဖြစ်
"တံ သဗ္ဗမ္ပိ သင်္ဂယှမာနံ ပိဋကတော တီဏိ ပိဋကာနိ ဟောန္တိ,နိကာယတော ပဉ္စ နိကာယာ,အင်္ဂတော နဝင်္ဂါနိ,
ဓမ္မက္ခန္ဓတော စတုရာသီတိပဉ္စသဟဿာနိ= မြတ်စွာဘုရား၏ စကားတော်များကို ပေါင်းစုလိုက်လျှင်
ပိဋကအားဖြင့် ၃ ပုံ၊ နိကာယ်အားဖြင့် ၅ ရပ်၊ အင်္ဂါအားဖြင့် ၉ ခု၊ ဓမ္မက္ခန္ဓာအားဖြင့် ရှစ်သောင်းလေးထောင်
"ကထံ?သဗ္ဗမ္ပိ ဟေတံ ပိဋကတော ဝိနယပိဋကံ သုတ္တန္တပိဋကံ အဘိဓမ္မပိဋကန္တိတိပ္ပဘေဒမေဝ ဟောတိ=
မည်သို့ မည်ပုံ ပိဋက ၃ ပုံ၊ နိကာယ် ၅ ရပ်စသည်ဖြစ်သနည်း? မြတ်စွာဘုရားရှင်၏စကားတော်အားလုံးသည်
ပိဋကအားဖြင့် ဝိနယပိဋက၊ သုတ္တန္တပိဋက၊ အဘိဓမ္မပိဋကအားဖြင့် ၃ မျိုးပြား၏။ "
ဤသို့ပိဋက ၃ ပုံအမည်ကို အစချီပြီးနောက် ပါတိမောက်နှစ်ပါး၊ ဝိဘင်း နှစ်ပါး၊ ခန္ဓက ၂၂ ပါး၊ ပရိဝါရ ၁၆ ခု
( ဆဋ္ဌသံဂါယနာကျမ်းစာခွဲပုံအရ ပါရာဇိကပါဠိ၊ ပါစိတ္တိယပါဠိ၊ မဟာဝဂ္ဂပါဠိ၊ စူဠဝဂ္ဂပါဠိ၊ ပရိဝါရပါဠိ
ဟူသောဝိနည်း ၅ ကျမ်း) သည် ဝိနယပိဋကမည်၏။ ဒီဃနိကာယ်၊ မဇ္ဈိမနိကာယ်၊ သံယုတ္တနိကာယ်၊
အဂုင်္တ္တရနိကာယ်၊ ခုဒ္ဒကပါဌစသော ၁၅ ကျမ်းဟူသော ခုဒ္ဒကနိကာယ်သည် သုတ္တန္တပိဋကမည်၏။ ဓမ္မသင်္ဂဏီ
(သို့ မဟုတ်) ဓမ္မသင်္ဂဟ စသော ၇ ကျမ်းသည် အဘိဓမ္မပိဋကမည်၏ ဟု အဓိပ္ပါယ်ရှင်းပြသည်။
ယင်းနောက် "ကထံ နိကာယတော ပဉ္စ နိကာယာတိ? နိကာယ်အားဖြင့် မည်သို့ မည်ပုံ ၅ မျိုးဖြစ်ရသနည်း
မေးခွန်းဖြင့်အစချီကာ နိကာယ်အကြောင်းကို အဋ္ဌကထာကျမ်းတို့ ရှင်းပြပြန်၏။ ထိုတွင် အုပ်စု (ဝဂ်) ၃၊
သုတ္တန်ပေါင်း ၃၄ ခုပါဝင်သော နိကာယ်သည် ဒီဃနိကာယ်မည်၏။ အုပ်စု ၁၅ စု၊ သုတ္တန်ပေါင်း ၁၅၂ ခု
ပါဝင်သော နိကာယ်သည် မဇ္ဈိမနိကာယ်မည်၏။ သုတ္တန်ပေါင်း ၇၇၆၂ ခုပါဝင်သောနိကာယ်သည်
သံယုတ္တနိကာယ်မည်၏။ သံယုတ္တနိကာယ်တွင် ဒေဝတာသံယုတ်စသည်ဖြင့် ဆိုင်ရာသံယုတ်အမည်ပေးကာ
ခွဲခြားထားသည်။ သုတ္တန်ပေါင်း ၉၅၅၇ ခုပါဝင်သောနိကာယ်သည် အဂုင်္တ္တရနိကာယ်မည်၏။
အဂုင်္တ္တရနိကာယ်တွင် ၁ မှ ၁၁ အထိ တရားအရေအတွက်အားလျော်စွာ ခွဲခြားထားသည်။
ခုဒ္ဒကနိကာယ်တွင် (ပထမသံဂါယနာကာလက) ခုဒ္ဒကပါဌစသော ကျမ်းပေါင်း ၁၅ ကျမ်းနှင့် ဒီဃနိကာယ်၊ မဇ္ဈိမနိကာယ်၊ သံယုတ္တနိကာယ်၊ အဂုင်္တ္တရနိကာယ်ကျမ်းစာများအပအခြားသောကျမ်းများ (ဝိနည်း ၅၊ အဘိဓမ္မာ ၇ ကျမ်း) ပါဝင်ကြသည်။
(ကတမော ခုဒ္ဒကနိကာယော ? သကလံ ဝိနယပိဋကံ,အဘိဓမ္မပိဋကံ,ခုဒ္ဒကပါဌာဒယော စ ပုဗ္ဗေ ဒဿိတာ ပဉ္စဒသပ္ပဘေဒါ, ဌပေတွာ စတ္တာရော နိကာယေ အဝသေသံ ဗုဒ္ဓဝစနံ။ ပါ-သီ-အ အဋ္ဌကထာများ)
စင်္ကာပူ၊ အဘိဓမ္မာအသင်းကြီး၏သင်တန်းပြဆရာက " အဲဒီတော့ လူတွေမှာ ပြဿနာတက်တာရှိတယ်၊
ပိဋကသုံးပုံနဲ့ နိကာယ် ၅ ရပ်တူသလားဆိုတော့ မတူဘူး၊ မှတ်ထားနော်၊ သို့ သော်လည်း ပိဋက ၃ ပုံကို
နိကာယ် ၅ ရပ်ထဲမှာ သွင်းဆိုသွင်းလို့ ရတယ်။ ဝိနည်း၊သုတ္တန်၊ အဘိဓမ္မာပိဋကတ်အားလုံးဟာ
ခုဒ္ဒကနိကာယ်ထဲမှာ ပါတယ်။" ဟု သေသေချာချာပြောဆို၏။ အမှန်မှာသူပြောသလိုမဟုတ်ချေ--။
ပါ-သီ-အ-အဋ္ဌကထာကြီးကျမ်း ၃ စောင်အရ ဝိနည်းပိဋက၊ အဘိဓမ္မာပိဋက ၂ သည် ခုဒ္ဒကနိကာယ်ထဲမှာ ပါသည်။အကျူံးဝင်သည်။ သုတ္တန်ကို ခုဒ္ဒကနိကာယ်အဖြစ်ပြောရာတွင် သတိပြုသင့်၏။ ဒီဃနိကာယ်လာသုတ္တန်၊ မဇ္ဈိမနိကာယ်လာသုတ္တန်၊ သံယုတ္တနိကာယ်လာသုတ္တန်၊ အဂုင်္တ္တရနိကာယ်လာသုတ္တန်များသည် ခုဒ္ဒကနိကာယ်မှာ
ထို့ ကြောင့် ဒီ-မဇ်-သံ-အင်နိကာယ်များမှာမပါသော သုတ္တန်များသည် ခုဒ္ဒကနိကာယ်မှာ ပါကြသည်ဟုသာ ဆိုနိုင်ပါ၏။ ခွဲခြားပြောရမည့်နေရာမှာ ခွဲခြားပြီးမပြောလျှင် လွဲတတ်သည်။
သင်တန်းနည်းပြက ဘာဘာညာညာမခွဲခြားဘဲ ရောချလိုက်သည့်အတွက် သူ၏စကားအမှားဖြစ်လေသည်။
တဖန် သင်တန်းနည်းပြက " အဲဒီတော့ ပိဋက ၃ ပုံရွတ်တာကို တိပိဋကလို့ ပြောတယ်။ နိကာယ်တွေကို
ရွတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်၊ နိကာယ်အတွက် စာအုပ်တွေကသီးသန့် ရှိသေးတယ်။"ဟု ပြောပြန်၏။
သူက လူတွေ ပိဋက ၃ ၊ နိကာယ် ၅ ရပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးတွေဝေနေသည်ဟု ဆို၏။ အမှန်မှာ
သူကိုယ်တိုင်တွေဝေနေခြင်းပင်ဖြစ်လေရာ "ကိုယ့်မျက်ချေးတော့ကိုယ်မမြင်၊ သူများမျက်ချေးကိုလိုက်မြင်သူပမာ"
ဥပမာ------ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရဟန်းရှင်လူတို့သည် မင်္ဂလသုတ်ကို ရွတ်ဆိုကြ၏။ ပိဋကအနေဖြင့်ဘယ်ပိဋကကို
ရွတ်သနည်းမေးက သုတ္တန်ပိဋကကို ရွတ်သည်ဟု ဖြေရ၏။ နိကာယ်အနေဖြင့် ဘယ်နိကာယ်ကိုရွတ်သနည်းမေးက မင်္ဂလသုတ်သည် သုတ္တနိပါတပါဠိ၊ စူဠဝဂ်တွင်ပါဝင်သောကြောင့် ခုဒ္ဒကနိကာယ်ကို ရွတ်သည်ဟုဖြေရ၏။
ပဋ္ဌာန်းပစ္စယနိဒ္ဒေသကို ရွတ်သည်ဆိုပါစို့ ---။ ဘယ်ပိဋကကို ရွတ်သနည်းမေးလျှင် အဘိဓမ္မာပိဋကကို
ရွတ်သည်ဖြေမည်။ ဘယ်နိကာယ်ကိုရွတ်သနည်းမေးလျှင် ခုဒ္ဒကနိကာယ်ကိုရွတ်သည်ဖြေမည်။
ပိဋကကိုရွတ်တာနှင့်နိကာယ်ကို ရွတ်တာမတူဟူသောစကားမှာသင်တန်းပြဆရာသည် ဆဋ္ဌမူပါဠိတော်
စာအုပ်များ၏မျက်နှာဖုံးမှာပါသည့် စာများကို အသေအချာကြည့်ဖူးပုံမပေါ်ကြောင်း "စကားထဲက သက်သေပြ"ဆိုသလို
စင်စစ် ဆဋ္ဌမူပါဠိတော်စာအုပ်မျက်နှာဖုံးတိုင်းမှာ ယင်းစာအုပ်ပါဝင်သော ပိဋကအုပ်စု၊ နိကာယ်အုပ်စုအမည်များ
ကို တိတိကျကျ ထင်ထင်ရှားရှားဖော်ပြထားစမြဲဖြစ်လေသည်။ သို့ဖြစ်ပေရာ"ပိဋကကိုပဲရွတ်တာ၊
နိကာယ်ကိုရွတ်တာမဟုတ်" ဟူသောသူ၏စကားမှာ ကာယကံရှင်သင်တန်းဆရာ၏ ဗဟုသုတနည်းမှုကို
နိကာယ်အတွက်စာအုပ်သီးသန့် ရှိသေးသည်ဟု သူကခပ်တည်တည်လုပ်နေသေးရာ နီးစပ်သူ အဘိဓမ္မာ
သင်တန်းသူ၊ သင်တန်းသားက နိကာယ်စာအုပ်များကို လက်တွေ့ ပြရန် တိုက်တွန်းသင့်ပါသည်။ သင်တန်းနည်းပြဆရာအလိုအရ မြန်မာပြည်ရှိ တိပိဋကဓရ၊ တိပိဋကကောဝိဒဆရာတော်များသည် ပိဋက ၃ ပုံကိုသာ အောင်သေးသည်၊ နိကာယ် ၅ ရပ်ကိုမအောင်ကြသေးဟု ဆိုရ၏။ ဆရာတော်များ၏ဂုဏ်ကို သေးသိမ်စေပြီး စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသောစကားဖြစ်၏။ တဏှာနှင့် လောဘအတူတူ (တခုတည်း)ဟု မသိသူ
တဦးက "ငါလောဘတော့ အကုန်ပယ်နိုင်ပြီ၊ တဏှာတော့ နည်းနည်းကျန်သေးတယ်"ပြောသလိုဖြစ်နေ၏။
နိကာယ် ၅ ရပ်အနက် နိကာယ် ၄ ရပ်အောင်မြင်သူအဖြစ် သာသနာရေးဦးစီးဌာနထုတ် သာသနာ့ရောင်ခြည်
စာစောင်၏ဆောင်းပါးရှင်တဦးဖြစ်ခဲ့သောဦးစံတင့် (စတုနိကာယဘာဏက)ဆိုသူကို သက်သေပြ၏။ ဦးစံတင့်၏ ဆောင်းပါးတပုဒ်စ၊ နှစ်ပုဒ်စကို စာရေးသူ (အမရဒီပ) လည်း ဖတ်ဖူး၏။ ထို ဦးစံတင့်သည် မည်သည့်စာမေးပွဲကို အောင်မြင်ပြီး "စတုနိကာယဘာဏက"ဖြစ်လာသည်ဆိုသည့်ကိစ္စကိုတော့ မသိပါ။ သို့ သော် ဦးစံတင့်နိကာယ် ၄ ခုကို ဆောင်နိုင်ခြင်းသည် ပိဋက ၃ ပုံ၊ နိကာယ် ၅ ရပ်ဆိုတာ ၃ စု၊ ၅ စု အနေဖြင့် ခွဲခြားပုံခြင်းသာမတူသည်၊ အမည်ချင်းသာမတူသည်၊ တရားကိုယ်အရကောက်အနှစ်သာရချင်းမှာအတူတူဖြစ်သည်ဟူသော အဋ္ဌကထာကျမ်းကြီးတို့ ၏ ဖွင့်ဆိုရှင်းပြချက်ကို ပယ်ရှားတွန်းလှန်ရန် ခိုင်မာသောသက်သေမဟုတ်ပါချေ--။
ပိဋကနှင့် နိကာယမတူဟုဆိုချင်လျှင် ဦးစံတင့်ကို သက်သေမပြသင့်---။ ပုဂ္ဂလဓိဋ္ဌာန်ဖြစ်နေသောကြောင့်ဖြစ်၏။
ခိုင်မာသော ထေရဝါဒပိဋကရှိ ပါဠိ၊ အဋ္ဌကထာ၊ ဋီကာကို ပြရပေမည်။ သို့ မှဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ဆုံးဖြတ်ရာရောက်ပေမည်။
စင်္ကာပူရှိမြန်မာအများစုသည် ဗုဒ္ဓသာသနာအရေးကို ကိုယ်တတ်မြောက်ထားသည့် ကွန်ပြူတာအတတ်ပညာဖြင့်
ပြန့် ပွားအောင်ဆောင်ရွက်ကြသည်ကို အွန်လိုင်းဓမ္မဒါနဌာနများတွင် တွေ့ မြင်ရ၏။ သီလ သမာဓိ ပညာရင့်ကျက်
ပြည့်စုံတော်မူသော ဆရာတော်ကြီးကို တပါးမဟုတ်တပါး ပင့်ဆောင်ပြီး အခါမလပ် တရားပွဲများ၊ သင်တန်းများ
ကျင်းပပြီး ဖွင့်လှစ်လေ့ရှိကြောင်း သတိပြုမိပါသည်။ စင်္ကာပူရောက်မြန်မာများသည် သာသနာရေးအတွက် တက်ကြွသူများဖြစ်ကြောင်း သိရ၏။အနာဂတ်သာသနာအတွက် စင်္ကာပူကို အများကြီးအားကိုးပါသည်။
သို့ သော် ဆွမ်းဆန်ထဲ ကြွက်ချေးရောတတ်သလို အမှန်ဓမ္မကို ရှာဖွေပါလျှက် အမှားအဓမ္မကို ရရှိတတ်သည့်အတွက် စင်္ကာပူ၊အဘိဓမ္မာအသင်းကြီးအနေဖြင့် အမှားကို အမှန်ဖြစ်အောင်ပို့ ချပေးတတ်သည့်ဆရာများ
(သို့ မဟုတ်) ငါ့ဝါဒကို ဗုဒ္ဓဝါဒအဖြစ် ရုပ်ဖျက်ကာဖြန့် ဖြူးကြမည့်ဆရာများကိုသဒ္ဓါပညာသတိတရား
Posted by amaradipa at 2:01 PM